Warkii toddobaadkan ugu wanaagsanaa caalamka ee dad badan ka farxiyay - BBC News Somali
Warkii toddobaadkan ugu wanaagsanaa caalamka ee dad badan ka farxiyay
Image caption 90% dadkii uu haleelay cudurkan ee tegay xarumaha caafimmaadka isla markiiba waa ay ka kaceen
Muddo tobannaan sano ah, caabuqa cudurka Ebola ayaa cabsi badan ku hayay dad badan oo ku nool caalamka, tira yar oo uu cudurkaas ku dhacay ayaa ka badbaaday.
Balse hadda waxaa muuqata in taas ay is badeshay, ka dib markii seynisyahanada ay ku dhawaqeen talaal tijaabo ah oo la siinayo dadka qaba cudurka Ebola ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna taas sare u sii qaaday rajadii laga qabay in dadka qaba cudurka Ebola ay ka badbadaan.
Daraasad la sameeyay ayaa muujineysa in ku dhawaad boqolkiiba 90 dadka qaba cudurka ay ka caafimaadi karaan caabuqaas, haddii marka hore ee uu cudurka haleelo la siiyo daawadan waxtarka leh.
Barafasoor Jean Jacques Muyembe, oo ah isuduwaha ka jawaabidda xaaladaha cudurka Ebola ee dalka DRC ayaa ku dhawaaqay arrintan, isagoo sheegay in dhawaan cudurka laga hortagi doona, lana daaweyn doona dadka uu ku dhaco, wuxuuna tijabada cusub ku tilmaamay "warka ugu wanaagsan sanadkan".
"Aad ayaa ugu faraxsanahay arrintaas, waxaana 40 sano oo nolosheyda ka mid ah ka fikirayay sidii aan u daweyn lahaa caabuqa Ebola, marka tani waa guul aan gaaray", ayuu yiri Jean oo la hadlayay BBC-da.
Image caption Dr Muyembe wuxuu cudurkan darsayay tan iyo 1976
Daraasadda la xiriirta cudurkan ayaa laga sameeyay dalka DRC oo ay cudurkan ugu dhinteen 1,800 oo qof tan iyo bishii Agosto ee sannadkii hore.
Tijaabooyinka ayaa bilawday bishii Nofembar ee sannadkii hore, waxayna xilligaas ahaayeen afar daawo oo kala duwan. 700 oo qof ayaa loo shaqaaleysiiyay la tacaalidda cudurkan, waxaana natiijada dadkii ugu horeeyay oo gaaraya 499, lana siiyay daawadaas ay yihiin dad la garanaya.
Dr Muyembe oo ka mid ah dhaqaatiirta ku hawlan daweynta cudurkan ayaa sheegay in laba ka mid ah daawooyinka oo loo yaqaano REGN-EB3 iyo mAb114, ay yihiin kuwa si adag uga hortaga caabuqa Ebola.
Daawooyiinkan waxay ka mid yihiin kuwa adkeeya difaaca jirka, kuwaas oo loo qalabeeyay inay ka hortagaan caabuqa keena cudurka Ebola.
Qaar ka mid ah dadkii la siiyay dawada REGN-EB3 ee la sheegay inay daweyso Ebola, waxay ka faa'ideen in khatartooda ay hoos u dhacday 29 boqlkiiba, marka loo eego kuwii aan daawooyinka helin ee ay khatartoodu gaartay 60-67 boqolkiiba.
Sidoo kale dawada kale ee ah mAb114 ayaa la sheegay in ayaduna ay hoos u dhigeyso khatarta cudurka boqolkiiba 34.
Balse arrintan la yaabka leh ayaa ah in dawada la hindisay ay boqlkiiba 6 hoos u dhigtay dadka halista cudurka uu ku yar yahay, kuwaas oo horay loo siiyay dawada REGN-EB3, halka marka la siiyay dawada kale ee mAb114 ay yareysay khatarta boqolkiiba 11.
"Waa muhiim, sababtoo ah Ebola wax dawo ah malahan, wax talaal ahna na horay uma lahayn, marka tani waa war wanaagsan," ayuu yiri Dr Muyembe.
Image caption 1,800 ayaa cudurkan ugu dhimatay dalka DRC
Joojinta cudurka Ebola
Dr Muyembe oo ka mid ah dhaqaatiirtii ogaaday cudurkan sannadkii 1976 ayaa intaa raaciyay in bukaanadii la siiyay dawoyiinka xojiya awooda jirka ay xaaladdooda ku soo hagagtay saacad gudaheed, waxaana uu hoosta ka xariiqay in dawadaas ay tahay mid daweyso cudurka, balse aysan ahayn mid ka hor tagta cudurka Ebola, laba asbuuc gudaheedna uu caabuqaas ka baxayo dhiigga qofka qaba.
"Waa in aan taxadarnaa, si aysan bukaanada gacanta ugu dhigin dawada dareeraha ah. Daweynta waa mid lagaga hortagayo caabuqa, mana ahan tallaal", ayuu yiri.
Natiijada kama dambeysta ah ee dawooyiinka tijaabada ah ayaa la filayaa bilaha Septembar iyo Oktobar ee sannadkan. Khubarada caafimmaadka ayaa sidoo kale sheegay in helitaanka dawooyinka cusub ay gacan ka geysaneysan doonaan sidii loo joojin lahaa faafidda caabuqa oo fara ba'an ku haya dad badan oo ku nool qaaradda Afrika.
"Saameynta waa mid kheyrul caadi ah, sababtoo ah dadku way ka soo horjeesteen dawada cudurka Ebola, waxayna xarumaha lagu daaweeyo u aqoonsadeen inay yihiin meelo lagu dhinto," Sidaas waxaa BBC-da u sheegay Dr Muyembe.
"Ma arki karaan dad halkas aadaya, ka dibna dib ugu laabanaya qoysaskooda iyo bulshadii ay ka yimaadeen, waxaa ugu wacan dawada la hirgeliyay, marka waa in meesha laga saraa qaabka uu cudurka ku faafi karo", ayuu raaciyay.
Image caption Dadkii ka badbaaday cudurka ayaa dib ugu laabtay guryahooda
Rajada la qabo
Dhaqaatiirta ku sugan Magaalada Goma oo ku taala xadka dalalka Uganda iyo Rwanda waxay dhowaanahan la tacaalayeen sidii xal loogu heli lahaa cudurkaas.
Maalmo kahor, hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay oo ka badbaaday cudurka Ebola ayaa dib loogu celiyay halkii ay deganaayeen, ka dib markii loo arkay in laga daweeyay cudurka.
Esperance Nabintu iyo canugeeda oo hal sano jir ah waxaa laba asbuuc kahor la geeyay isbital, si looga daweeyo cudurka oo horay u galaaftay nolosha seygeeda.
"Ilaahay ba ku mahdinayaa", ayay tiri, "waxan la xanuunsanaa cudurka Ebola, balse hadda waa la iga daweeyay, inkastoo ninkeyga uu u dhintay, sababtuna waxay ahayd in xarumaha lagu daweeyo cudurka la geeyay xilli dambe".
Waxay intaas ku dartay in cudurka Ebola uu wali jiro, "jirkeyga ayaa ka dareemay cudurkan, waa dilaa balse si dhaqsi leh ayaa loo daweyn karaa."
Muxu yahay cudurka Ebola?
Ebola waa caabuq keeni kara in qofka uu qandhado, daciif noqdo murqaha iyo cunahana ay xanuunaan
Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah hunqaaco ama matag, shuban iyo in dhiig uu ka qulqulo uur ku jirta iyo jirka sare
Cudurka waxay dadku ku kala qaadi karaan istaabasho uu la sameeyo qof kale oo qaba cudurka Ebola, gaar ahaan mark marka la taabto maqaarka qofka, afka, sanka ama dhiigga uu mantagay qofka qaba Ebola.
Dadka ayaa u dhinta in xubnaha jirka oo daciif noqda iyo fuuq bax ba'an.